Nezvedu | Shijiazhuang Huikang Chikafu Co., Ltd.
Shijiazhuang Huikang chikafu Co, Ltd. yakagadzwa mu1993, ine yakanyoreswa capital 10 miriyoni RMB. Iyo hombe yekugadzira chikafu bhizinesi uye zvakare kusangana kwekugadzira, kugadzirisa uye kutengeserana.
Huikang kambani yezvikafu iri muZhengding County, mudunhu reHeibei, padyo neShijiazhuang airport, padyo neBeijing-Shenzhen Expressway, uye 240Km kuenda Beijing, 350km kubva kuTianjin Port. Iko kune kwakanyanya nzvimbo geography chinzvimbo uye zviri nyore traffic zvivakwa.
Iyo kambani inovhara nzvimbo ye45000㎡, ine imwe yakavharika yakabikwa chikafu chewekishopu, ine nzvimbo ye2800 ㎡, inogadzira matani gumi ezvigadzirwa zvakabikwa zuva rega rega; Imwe musangano wakazara wekugadzirisa michero miriwo uye chikafu chegorosi nenzvimbo ye1800㎡, inogona kuburitsa matani gumi nemasere ezuva; Imwe yekutsvagisa nekuvandudza musangano wezvigadzirwa zvitsva, izvo zvine seti imwe yenzvimbo dzekutsvagisa dzakazara; Tatu tembiricha yakaderera, inogona kuchengeta matani mazana matatu nemazana ezvigadzirwa; Imwe microorganism uye yemuviri / yemakemikari kuongorora Laborator, iyo ine zvigadzirwa zvemberi uye zvekuyedza michina. Uye zvakare, kambani iyi zvakare ine paki yekuratidzira yekudyara michero nemiriwo.
Iyo kambani inogona kuburitsa zvigadzirwa zvegorosi zvekudya (senge madomasi, wonton, doubao, nezvimwewo) uye michero nemichero yezvirimwa (zvakadai hanyanisi, mbatatisi, karoti, kiwi muchero, sitirobheri, nezvimwewo) matani mazana matatu nemazana matatu, uye zvinogona kuburitsa chando zvigadzirwa zenyama, chikafu chakabikwa matani 4000 gore rega. The zvigadzirwa vari ecported kuJapan, America, Australia, Hongkong uye dzimwe nyika uye kumatunhu. Uye kutengeswa kwezvigadzirwa kunotora chikamu chakakura mumusika wepamba.
Shijiazhuang Huikang chikafu co., Ltd. yawana rezenisi renyama inogadzirwa nekupisa uye zvigadzirwa zvayo zvinotorwa kubva kumhuka dzakapatsanurwa dzakatemwa negurukota rezvekurima, Masango neHove dzeJapan kubvira 2001; akawana ISO9001 chitupa muna 2002 uye HACCP chitupa kubvira 2003. Kambani yedu yakagadza Yakanaka Kugadzira Muitiro uye Hutsanana Standard Operation Maitiro, uye zvakagadziriswa zvigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa zveHazard Analysis Critical Control Point, yakaumba yakakwana mhando yekuchengetedza chengetedzo uye kutarisa uye kutarisira hurongwa , Kuti uve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvinogona kusangana neyakaenzana mhando yemhando yekutengesa kunze chikafu.
Kambani yedu ndiyo shasha mumakwikwi eiyi indasitiri, inopa musika zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakachengeteka, Inopihwa mukurumbira wakanaka, uye uve mutengesi wekutengesa muChina. Inofarirwa nevatengi vekumba neve foregn.
Shijiazhuang Huikang Food Co, Ltd. gara uchitevedzera bhizinesi uzivi hwe "Hunhu hwakakosha hwekusimudzira bhizinesi, kutendeka ndiko kunosimudzira kwekuvandudza bhizinesi. Isu tinogamuchira nemazvo maindasitiri ese kuti abatane nesu uye tigadzire ramangwana rakajeka.